RAJAONARIVELO MAMY Atahoran’ny sasany ny fanarenana entin’ny TIM
Saika nisy nitory avokoa ireo kandida Ben’ny tanana natolotry ny antoko Tiako I Madagasikara ka nivoaka ho mpandresy tamin’ny fifidianana farany teo. N
itondra fanazavana mahakasika izany Rajaonarivelo Mamy, lefitry ny Ben’ny tanana Lalao Ravalomanana ka nambarany fa ny fanarenana entin’ny TIM ho enti-mampandroso ny firenena no tena tsy tantin’ireo mpanenjika ka izay no mahatonga izany. Raha manao zavatra mantsy ny TIM hoy izy dia tsy mikendry afa-tsy ny hampandroso ny firenena sy hanandratra avo azy fa tsy hanaotao foana kosa. Ny fanjakana ankehitriny kosa hoy izy na dia manao zavatra aza dia hita fa tsy mampandroso ny firenena izany fa vao mainka manakorontana aza. Notsindrian-dRajaonarivelo Mamy moa fa tsy miova ny foto-kevitra hijoroan’ny TIM sy ny fomba fijerin’izy ireo hatreto dia ny hanarina ireo lesoka tsy mety eto amin’ny firenena miainga eny ifony mba hisy fiantraikany amin’ny isam-baravarana izany.